Macalimiin dugsi Qur'aan oo lagu dilay Sh/dhexe | KEYDMEDIA ONLINE
Macalimiin dugsi Qur’aan oo lagu dilay Sh/dhexe
Macalimiintan ayaa markii la dilayey ku subcinayey Qur'aanka Kariimka ah.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in saakay aroortii ay rag hubeysan dileen Shan macalin dugsi qur'aan, xilli ay subcinayeen.
Falkan ayaa ka dhacay deegaanka Koogaar oo qiyaastii 50 km u jira degmada Cadalle ee Shabellaha Dhexe.
Goobjoogayaal ayaa Keydmedia Online u sheegay in macalimiintan ay subaca bilaabeen salaaddii subax ee saakay kadib, hase yeeshee ay si lama filaan ah kusoo galeyn goobtii lagu subcinayey dableydan hubeysan ee falkan geystay.
Macalimiinta la dilay ayaa kala ah:
1. Sheekh Daahir Xasan Cali Dheere
4. Macalin Muqtaar Cabdullaahi Cilmi
Illaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysay dilka macalimiintan, mana jirto wax war ah oo kasoo baxay maamulka gobolka Shabellaha Dhexe.
Rooble ‘Rogane’ oo marin habaabiyay arrinta dhalinyarada maqan
Warar 12 June 2021 19:40
Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta Rooble, ayaa u istaagay marin habaabinta, arrinta dhalinyarada loo qaaday Eritrea, wuxuuna magacaabay guddi la rumeysan yahay in uusan dhexdhexaad ahayn, oo u badan kooxda Farmaajo.
Warar 12 June 2021 18:48
Qoorqoor oo shaqadiisii ku soo aruurtay safarro aan micno lahayn
Warar 12 June 2021 17:14
Xildhibaan wada abaabul cadaadis lagu saarayo Farmaajo, Kheyre iyo Fahad
Warar 12 June 2021 16:02